Onyankopɔn Frɛɛ No “M’adamfo”—Yesaia 41:8 | Adesua
Yehowa Frɛɛ No “M’adamfo”
Suasua Yehowa Nnamfo
Di Yehowa Nokware
Suasua Yehowa Asomfo Anokwafo
ASETENAM NSƐM Yehowa Ama Asi Me Yiye Wɔ Ne Som Mu
Kɔ So Fa Anigye Som Yehowa
KENKAN WƆ Afrikaans Aukan Baoule Bassa (Cameroon) Bislama Boulou Cakchiquel (Western) Cambodian Chitonga Chokwe Chol Cibemba Cinyanja Dangme Drehu Efik English Ewe Fon French Ga Garifuna Greenlandic Haitian Creole Hausa Hmong (White) Iban Igbo Isoko Italian Karen (S'gaw) Kazakh Kikaonde Kikongo Kimbundu Kisi Kisonge Kongo Krio Kwangali Kwanyama Lamba Laotian Lingala Lunda Luvale Maltese Mam Mambwe-Lungu Mauritian Creole Mazatec (Huautla) Mbunda Mende Mizo Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndonga Ngabere Ngangela Nyaneka Nzema Otetela Pidgin (Cameroon) Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Saramaccan Sepedi Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Silozi Spanish Swahili (Congo) Swati Tahitian Tiv Tlapanec Tojolabal Totonac Tshiluba Tsonga Tswana Twi Tzeltal Umbundu Urhobo Uruund Venda Wallisian Wayuunaiki Welsh Xhosa Yoruba Zulu
Ɔwɛn-Aban—Nea Adesua Nsɛm Wom | February 2016
“Israel, woyɛ m’akoa; Yakob, wo na mapaw wo, m’adamfo Abraham aseni.”—YESAIA 41:8.
NNWOM: 91, 22
Ɔkwan bɛn so na nimdeɛ ne osuahu a Abraham nyae no hyɛɛ ne gyidi den?
Dɛn na Abraham yɛe de hyɛɛ ɔne Onyankopɔn adamfofa mu den?
Wobɛyɛ dɛn asuasua Abraham na woahyɛ wo ne Yehowa adamfofa mu den?
1, 2. (a) Yɛyɛ dɛn hu sɛ nnipa betumi afa Onyankopɔn adamfo? (b) Dɛn na yebesusuw ho wɔ adesua yi mu?
EFI da a wɔbɛwo yɛn kosi da a yebewu no, nea yehia ne ɔdɔ. Ɛnyɛ ɔbarima ne ɔbaa ntam dɔ nko ara na nnipa hia, mmom ehia sɛ wɔdodɔ wɔn ho na wonya nnamfo pa nso. Nea yehia paa ne sɛ Yehowa bɛdɔ yɛn. Esiane sɛ Onyankopɔn yɛ ade nyinaa so tumfoɔ na yɛrentumi mfa yɛn ani nhu no nti, nnipa pii susuw sɛ yɛrentumi ne Onyankopɔn mfa adamfo ma ɛnyɛ yiye. Nanso, yenim sɛ yebetumi ne no afa adamfo!
2 Bible ma yehu sɛ nnipa bi tumi faa Onyankopɔn adamfo. Ɛsɛ sɛ yesuasua nea wɔyɛe no. Adɛn ntia? Efisɛ ade a ɛho hia paa a yebetumi de asi yɛn ani so wɔ abrabɔ mu ne sɛ yɛne Onyankopɔn bɛfa adamfo. Enti momma yɛnhwɛ nea Abraham yɛe na yensuasua no. (Kenkan Yakobo 2:23.) Ɛyɛɛ dɛn na ɔbɛyɛɛ Onyankopɔn adamfo? Ná Abraham ne Onyankopɔn adamfofa no gyina gyidi so, na Bible frɛ no wɔn a “wɔwɔ gyidi nyinaa agya.” (Romafo 4:11) Bere a woresusuw nea Abraham yɛe ho no, bisa wo ho sɛ, ‘Mɛyɛ dɛn asuasua Abraham gyidi na mama me ne Yehowa adamfofa mu ayɛ den?’
ƐYƐƐ DƐN NA ABRAHAM BƐYƐƐ ONYANKOPƆN ADAMFO?
3, 4. (a) Gyidi ho sɔhwɛ a ɛyɛ den paa bɛn na ɛbɛyɛ sɛ Abraham hyiae? (b) Adɛn nti na na Abraham pɛ sɛ ɔde Isak bɔ afɔre?
3 Wo deɛ hwɛ Abraham a wadi bɛyɛ mfe 125 a ɔde nkakrankakra reforo bepɔw.  (Hwɛ awiei asɛm no.) Ná ne ba Isak a wadi mfe 25 no di n’akyi. Nnyina a wɔde rekɔbɔ afɔre sõ Isak, na Abraham kura sekan ne nneɛma a ɔde bɛsɔ ogya. Ɛbɛyɛ sɛ saa akwantu no ne akwantu a ɛyɛɛ den paa maa Abraham. Ɛwom sɛ na wabɔ akwakoraa deɛ, nanso na ɔda so ara wɔ ahoɔden. Nea ɛmaa saa akwantu no yɛɛ den maa no ne sɛ, na Yehowa aka akyerɛ no sɛ ɔmfa ne ba no nkɔbɔ afɔre!—Genesis 22:1-8.
Ɛnyɛ sɛ Abraham fitii prɛko pɛ na otiee Onyankopɔn
4 Ɛbɛyɛ sɛ eyi ne gyidi ho sɔhwɛ a ɛyɛ den paa a Abraham hyiae. Ebinom ka sɛ esiane sɛ Onyankopɔn tirim yɛ den nti na ɔka kyerɛɛ Abraham sɛ ɔmfa ne ba no mmɔ afɔre. Afoforo nso ka sɛ na Abraham nnɔ ne ba no nti na ɔpenee so sɛ ɔde no bɛbɔ afɔre no. Gyidi a nkurɔfo nni nti na wɔkeka nsɛm a ɛte saa. Afei nso, wonnim nea gyidi kyerɛ ankasa, na wonnim sɛnea ɛyɛ adwuma. (1 Korintofo 2:14-16) Nanso, ɛnyɛ sɛ Abraham fitii prɛko pɛ na otiee Onyankopɔn. Gyidi amapa a na ɔwɔ nti na otiee Onyankopɔn. Ná onim sɛ Yehowa renka sɛ ɔnyɛ biribi a ebepira no. Ná Abraham nim sɛ, sɛ otie Yehowa a, Yehowa behyira ɔne ne dɔba no. Ɛyɛɛ dɛn na Abraham nyaa gyidi a ɛyɛ den saa? Onyaa nimdeɛ ne osuahu.
5. Ɛyɛɛ dɛn na Abraham huu Yehowa, na nea osuae no kaa no sɛn?
5 Nimdeɛ. Abraham tenaa kurow bi a wɔfrɛ no Ur mu. Ná nnipa a wɔwɔ hɔ no som abosom, na na ne papa nso som bi. (Yosua 24:2) Enti ɛyɛɛ dɛn na Abraham huu Yehowa? Bible ma yehu sɛ na Noa ba Sem yɛ Abraham busuani. Sem tenaa ase kosii sɛ Abraham dii bɛyɛ mfe 150. Ná Sem gyidi sõ paa, na ɛbɛyɛ sɛ ɔkaa Yehowa ho asɛm kyerɛɛ n’abusuafo. Yɛrentumi nsi no pi deɛ, nanso ebetumi aba sɛ saa kwan yi so na Abraham suaa Yehowa ho ade. Ade a Abraham suae no ma ɔbɛdɔɔ Yehowa, na ɛboaa no maa onyaa gyidi.
6, 7. Ɔkwan bɛn so na osuahu a Abraham nyae no hyɛɛ ne gyidi den?
6 Osuahu. Ɛyɛɛ dɛn na Abraham nyaa osuahu a ɛhyɛɛ ne gyidi den wɔ Yehowa mu? Ebinom ka sɛ, nea wodwinnwen ho no, ɛno na ɛkanyan wo ma woyɛ biribi. Nea Abraham sua faa Onyankopɔn ho no kaa ne koma, na ɛmaa no nyaa obu a emu dɔ maa “Ɔsorosoroni Yehowa Nyankopɔn, ɔsoro ne asase Bɔfo, no.” (Genesis 14:22) Bible ka obu a emu dɔ saa ho asɛm sɛ ɛyɛ “nyamesuro.” (Hebrifo 5:7) Ehia sɛ yenya nyamesuro ansa na yɛatumi ne Onyankopɔn afa adamfo. (Dwom 25:14) Osuro a ɛte saa na ɛkaa Abraham ma otiee Yehowa.
7 Onyankopɔn ka kyerɛɛ Abraham ne Sara sɛ wontu mfi Ur nkɔ ɔman foforo so. Saa bere no, na wɔn mfe akɔ anim, na na wɔbɛtena ntamadan mu wɔn nkwa nna a aka nyinaa. Ná Abraham nim sɛ obehyia asiane pii deɛ, nanso na wasi ne bo sɛ obetie Yehowa. Osetie a ɔyɛe nti, Onyankopɔn hyiraa no, na ɔbɔɔ ne ho ban. Ɛho nhwɛso ni. Mmere bi wɔfaa Abraham yere Sara hoɔfɛfo no fii ne nkyɛn. Anka wɔrepɛ Abraham nso akum no, nanso Yehowa nam anwonwakwan so bɔɔ Abraham ne Sara nyinaa ho ban. (Genesis 12:10-20; 20:2-7, 10-12, 17, 18) Saa osuahu ahorow a Abraham nyae no hyɛɛ ne gyidi den.
8. Yɛbɛyɛ dɛn anya nimdeɛ ne osuahu a ɛbɛma yɛne Yehowa adamfofa mu ayɛ den?
8 Yebetumi ne Yehowa afa adamfo? Aane, yebetumi! Ɛsɛ sɛ yesua Yehowa ho ade te sɛ Abraham. Yɛn nso yebetumi anya nimdeɛ ne osuahu a ɛte saa. Ɛnnɛ, yɛwɔ nimdeɛ ne osuahu pii sen Abraham. (Daniel 12:4; Romafo 11:33) “Ɔsoro ne asase Bɔfo” no ho nsɛm pii wɔ Bible mu. Nea yesua no ma yɛdɔ Yehowa, na ɛboa yɛn ma yenya obu a emu dɔ ma no. Ɔdɔ ne obu a yɛwɔ ma Onyankopɔn no ka yɛn ma yetie no. Sɛ yetie no a, yebehu sɛ ɔbɔ yɛn ho ban na ohyira yɛn. Eyi ma yenya osuahu a ɛhyɛ yɛn gyidi den. Sɛ yeyi yɛn yam som Yehowa a, yebenya akomatɔyam, asomdwoe, ne anigye. (Dwom 34:8; Mmebusɛm 10:22) Sɛ yɛkɔ so nya nimdeɛ ne osuahu a, yɛne n’adamfofa mu bɛkɔ so ayɛ den.
NEA ƐMAA ABRAHAM KƆƆ SO YƐƐ ONYANKOPƆN ADAMFO
9, 10. (a) Dɛn na ɛma adamfofa mu yɛ den? (b) Dɛn na ɛma yehu sɛ Abraham antoto ɔne Yehowa adamfofa ase?
9 Yebetumi de adamfofa atoto agyapade a ɛsom bo ho. (Kenkan Mmebusɛm 17:17.) Ɛnte sɛ kuku a ɛyɛ fɛ a yɛde nhwiren hyɛ mu siesie dan mu. Mmom, ɛte sɛ nhwiren a ɛyɛ fɛ a ehia sɛ yegugu so nsu ma enyin frɔmfrɔm. Saa ara na Abraham antoto ɔne Yehowa adamfofa ase. Dɛn na ɔyɛe?
Adamfofa te sɛ nhwiren a ɛyɛ fɛ a ehia sɛ yegugu so nsu ma enyin frɔmfrɔm
10 Abraham kɔɔ so suroo Onyankopɔn na otiee no. Bere a ɔne n’abusua ne ne nkoa tu kɔɔ Kanaan no, ɔmaa Yehowa kɔɔ so kyerɛɛ no kwan ma osisii gyinae akɛse ne nketewa. Aka afe baako ma wɔawo Isak, bere a na Abraham adi mfe 99 no, Yehowa ka kyerɛɛ no sɛ ontwa mmarima a wɔwɔ ne fie nyinaa twetia. Abraham gyee Yehowa akyinnye anaa ɔde biribi yii ne ho ano sɛ ɔrentumi nyɛ nea Yehowa aka no anaa? Dabi, ɔde ne ho too Yehowa so, na “saa da no” ara ɔyɛɛ nea Yehowa kae no.—Genesis 17:10-14, 23.
11. Adɛn nti na na Sodom ne Gomora ho asɛm haw Abraham, na dɛn na Yehowa yɛ de boaa no?
11 Esiane sɛ na Abraham tie Yehowa wɔ nneɛma nketenkete mu mpo nti, ɛmaa wɔn adamfofa mu yɛɛ den. Ohui sɛ na obetumi ne Yehowa abɔ biribiara ho nkɔmmɔ; ná nsɛm a ɛkyere n’adwene mpo ka ho. Ɛho nhwɛso ni. Bere a Yehowa ka kyerɛɛ Abraham sɛ ɔrebɛsɛe Sodom ne Gomora no, ɛhaw Abraham. Adɛn ntia? Ná osuro sɛ anhwɛ a na Yehowa akunkum apapafo afra abɔnefo. Ɛbɛyɛ sɛ na ɔredwen ne wɔfaase Lot ne n’abusua a wɔte Sodom no ho. Abraham de ne ho too Yehowa, “asase nyinaa temmufo no” so. Enti ɔkaa nea ɛhaw no ho asɛm kyerɛɛ Yehowa ahobrɛase mu. Yehowa nyaa n’adamfo no ho abotare, na ɔmaa ohui sɛ ɔyɛ mmɔborɔhunufo. Yehowa ka kyerɛɛ no sɛ, bere biara a ɔde atemmu bɛba no, ɔhwehwɛ apapafo gye wɔn nkwa.—Genesis 18:22-33.
12, 13. (a) Sɛn na nimdeɛ ne osuahu a Abraham nyae no boaa no akyiri yi? (b) Dɛn na ɛkyerɛ sɛ na Abraham wɔ Yehowa mu gyidi?
12 Eyi ma yehu sɛ nimdeɛ ne osuahu a Abraham nyae no boaa no maa ɔkɔɔ so ne Yehowa faa adamfo a emu yɛ den. Akyiri yi, bere a Yehowa ka kyerɛɛ Abraham sɛ ɔmfa ne ba no mmɔ afɔre no, na onim sɛ Yehowa wɔ abotare, ɔwɔ mmɔborɔhunu, ɔyɛ ɔnokwafo, na wabɔ ne ho ban bere nyinaa. Ná Abraham gye di paa sɛ Yehowa nsesa mmɛyɛɛ otirimɔdenfo prɛko pɛ! Adɛn nti na yɛreka saa?
13 Ansa na Abraham regyaw ne nkoa no hɔ no, ɔkae sɛ: “Mo ne afurum no ntwɛn wɔ ha, na me ne abarimaa no rekɔ yɛn anim kakra akɔsom na yɛasan aba mo nkyɛn.” (Genesis 22:5) Ná Abraham kyerɛ sɛn? Ná Abraham nim sɛ ɔde Isak rekɔbɔ afɔre, enti bere a ɔkaa sɛ ɔbɛsan ne no aba no, na ɔredi atoro anaa? Dabi. Bible ka sɛ na Abraham nim sɛ, sɛ Isak wu mpo a, Yehowa betumi anyan no. (Kenkan Hebrifo 11:19.) Ɛmfa ho sɛ na Abraham ne Sara anyinyin no, na Abraham nim sɛ Yehowa ama no tumi ama wawo ba. (Hebrifo 11:11, 12, 18) Enti ohuu sɛ biribiara nso Yehowa yɛ. Ná Abraham nnim nea ebesi saa da no. Nanso na Abraham gye di sɛ Yehowa betumi anyan Isak na ama Onyankopɔn bɔhyɛ nyinaa abam. Ɛno nti na Bible frɛ Abraham sɛ wɔn a “wɔwɔ gyidi nyinaa agya” no.
Ná Abraham gye di sɛ Yehowa betumi anyan Isak na ama Onyankopɔn bɔhyɛ nyinaa abam
14. Nsɛnnennen bɛn na worehyia wɔ Yehowa som mu, na sɛn na nea Abraham yɛe no betumi aboa wo?
14 Ɛnnɛ, Yehowa nka nkyerɛ yɛn sɛ yɛmfa yɛn mma mmɔ afɔre, nanso ɔka kyerɛ yɛn sɛ yenni n’ahyɛde so. Ɛtɔ mmere bi a, ebia yɛrente nea enti a ɛsɛ sɛ yedi Yehowa ahyɛde so anaa ebia ɛbɛyɛ den ama yɛn sɛ yebedi so. Ɛyɛ a wote nka saa? Ebinom wɔ hɔ a, asɛnka adwuma no yɛ den ma wɔn. Ebia wɔfɛre ade, na ɛyɛ den ma wɔn sɛ wɔne nkurɔfo a wonnim wɔn bɛkasa. Afoforo nso suro sɛ nkurɔfo behu sɛ wɔyɛ soronko wɔ adwuma mu anaa sukuu mu. (Exodus 23:2; 1 Tesalonikafo 2:2) Sɛ ɛba sɛ ɛsɛ sɛ woyɛ biribi a ɛyɛ den a, dwinnwen gyidi ne akokoduru a Abraham daa no adi no ho. Sɛ yedwinnwen nea mmarima ne mmea anokwafo yɛe ho a, ebetumi akanyan yɛn ma yɛasuasua wɔn na yɛabɛn yɛn Adamfo Yehowa paa.—Hebrifo 12:1, 2.
ABRAHAM NE YEHOWA ADAMFOFA
BERE A NA WƆTE UR
Abraham ne Sara huu Yehowa na wɔsom no
Abraham tiee Onyankopɔn na otu fii Ur
BERE A WƆNAM KWAN SO REKƆ KANAAN
Yehowa bɔɔ Abraham ne Sara ho ban wɔ wɔn akwantu mu
Abraham yɛɛ osetie na otwaa mmarima a wɔwɔ n’abusua mu nyinaa twetia
Ná Sodom ho asɛm haw Abraham; Yehowa nyaa abotare tiee no
Yehowa maa Abraham ne Sara woo ba
Abraham nyaa gyidi, na na ɔpɛ sɛ ɔde Isak bɔ afɔre
Abraham wui, na na “wanyin abɔ akora a ne nna amee no”
ADAMFOFA A NHYIRA WOM
15. Adɛn nti na yebetumi aka sɛ Abraham annu ne ho da sɛ otiee Yehowa biribiara mu?
15 Abraham nuu ne ho sɛ odii Yehowa ahyɛde so anaa? Bible ka sɛ Abraham wui no, “na wanyin abɔ akora a ne nna amee no.” (Genesis 25:8) Bere a Abraham dii mfe 175 no, na obetumi adwinnwen ne nkwa nna a ɔde atena ase nyinaa ho na wanya akomatɔyam sɛ ɔbɔɔ ne bra yiye. Adɛn ntia? Efisɛ ɔmaa ɔne Yehowa adamfofa ho hiaa no sen biribi foforo biara. Nanso, sɛ Bible ka sɛ na Abraham “abɔ akora a ne nna amee no” a, ɛnkyerɛ sɛ na ne kɔn nnɔ sɛ ɔbɛtena ase bio daakye.
16. Sɛ Abraham ba Paradise a, anigye bɛn na obenya?
16 Bible ka sɛ na Abraham retwɛn “kurow a ɛwɔ fapem ankasa a ne kyekyefo ne ne yɛfo ne Onyankopɔn.” (Hebrifo 11:10) Ná Abraham gye di sɛ da koro obehu saa kurow no; Onyankopɔn Ahenni a ɛredi asase so. Obehu nso ampa! Wo deɛ, hwɛ sɛnea Abraham ani begye sɛ ɔbɛtena paradise asase so na ɔne Onyankopɔn akɔ so afa adamfo! N’ani begye sɛ obehu sɛ gyidi a ɔdaa no adi no aboa Onyankopɔn asomfo mfe mpempem pii! Sɛ Abraham ba Paradise a, obehu sɛ afɔre a ɔbɔe wɔ Bepɔw Moria so no gyina hɔ ma biribi kɛse a na ɛbɛba daakye. (Hebrifo 11:19) Afei nso obehu sɛ yaw a ɔfaa mu bere a ɔyɛɛ sɛ ɔde ne ba Isak rebɔ afɔre no aboa anokwafo ɔpempem pii. Eyi ama wɔahu sɛnea Yehowa tee nka bere a ɔde ne Ba Yesu Kristo maa adesamma sɛ agyede no. (Yohane 3:16) Nea Abraham yɛe no aboa yɛn nyinaa ma yɛanya anisɔ kɛse ama agyede no. Ɛno ne ɔdɔ a ɛsen biara a Yehowa ada no adi!
17. Dɛn na woasi wo bo sɛ wobɛyɛ, na dɛn na yebesua wɔ adesua a edi hɔ no mu?
17 Momma yɛn mu biara nsi ne bo sɛ obesuasua Abraham gyidi. Yɛn nso, ehia sɛ yenya nimdeɛ ne osuahu. Sɛ yɛkɔ so sua Yehowa ho ade na yetie no a, obehyira yɛn na wabɔ yɛn ho ban. (Kenkan Hebrifo 6:10-12.) Momma Yehowa nyɛ yɛn Adamfo daa daa! Adesua a edi hɔ no, yɛbɛhwɛ anokwafo mmiɛnsa a wɔn nso bɛyɛɛ Onyankopɔn nnamfo.
^  (nkyekyɛm 3) Kan no, na wɔfrɛ Abraham ne Sara sɛ Abram ne Sarai. Nanso adesua yi mu deɛ, yɛde edin a akyiri yi Yehowa de maa wɔn no na ɛbɛyɛ adwuma.
Sɛ yɛpɛ sɛ yɛne Onyankopɔn fa adamfo a, ɛsɛ sɛ yehu no yiye. Sɛ yɛkɔ so sua ne ho ade a, yebenya ɔdɔ ne obu kɛse ama no. Eyi bɛkanyan yɛn ma yɛde yɛn ho ato no so na yɛatie no. Sɛ yɛkɔ so hyɛ yɛne Yehowa adamfofa mu den a, yɛbɛyɛ n’adamfo daa
ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM February 2016